Ukuphupha iBass Discover ▷ Discover Online ▷ ➡️
Ukuphupha iBass. Ngoncedo lwesi sikhokelo, kuya kuba lula kuwe ukutolika amaphupha kwaye uqonde intsingiselo yawo.
I-bass, ekwabizwa ngokuba yi-bass yombane, sisixhobo sombane kwaye iyafana nekatala yombane. Kubalulekile phantse kuwo onke amaqela. Izandi ezinzulu sisiseko seendlela ezininzi zomculo kubandakanya ilitye, i-punk, i-blues, kunye ne-jazz, kodwa kunye ne-pop kunye ne-hit. Nangona kunjalo, i-bass zombane ifuna i-amplifier ukwenza ukuba iitoni zomtya zivakala.
Ukuba udlala ibhasi ephupheni, umculo unendawo ebalulekileyo kubomi bokwenyani nawo. Mhlawumbi umntu olalayo ngenene ngu-bassist webhendi okanye unqwenela ukuba nezakhono zomculo. Ukutolikwa kwamaphupha, ingqalelo kufuneka ihlawulwe nokuba umntu ophuphayo wenza umculo ngokwakhe okanye umamele.
1 Uphawu lwephupha «Phantsi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Phantsi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Phantsi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Phantsi» - ukutolikwa ngokubanzi
I-bass ayisosixhobo sodwa, kodwa yinxalenye ebalulekileyo yeemculo zomculo zangoku. Ngokwengcaciso yohlalutyo lwamaphupha, uphawu lwephupha ke ngoko lusimemo Joyina iqela. Iphupha litsalela ingqalelo kwisidingo sokuziqhelanisa kwaye, ukuba kukho imfuneko, nokuzithoba ukuze wamkelwe kwiqela.
Xa kudlalwa umculo ephupheni, izimvo ezisisiseko zomphuphi ngobomi ziyavezwa kulo. Ukutolikwa okuxhaphakileyo kwamaphupha esimboli "esezantsi", kubalulekile ukuba uqwalasele ukuba umntu ophuphayo udlala indima ebonakalayo okanye yokwenziwa. Ukuba uzifumana ungumculi, kwelinye icala, kukho umngcipheko wokuba neentloni okanye ulwe kubomi bokwenyani. Kwelinye icala, umfanekiso wephupha luphawu lwe ukuqonda.
Ukuva i-bass kubonisa amava amnandi ngokokuhlalutya ngokubanzi kwamaphupha. Umphuphi usenokuba nezinto ezikhuthaza inkanuko kutshanje okanye amava amnandi. Isimboli yephupha inokuba luphawu lomnqweno wokuvumelana ngakumbi kunye nokulingana kubomi bemihla ngemihla. Ukuba umntu oleleyo okwangoku uhamba kwinqanaba elinzima, izandi ezinzulu zokulala zibonelela ngokuthuthuzela kunye nokhathalelo.
Kananjalo kubalulekile ukuba utolike iphupha ukuba izandi zebass ziziva njani. Ukuba uyawuthanda umculo, isimboli yamaphupha ithembisa ngekamva uyolo nolonwabo. Ukuba i-bass ivakala ibukhali kwaye ineetoni ezingathandekiyo okanye ezilusizi ephupheni, kukho isoyikiso sokungoneliseki kusapho okanye phakathi kwabahlobo.
Uphawu lwephupha «Phantsi» - ukutolikwa kwengqondo
Kuhlalutyo lwengqondo lwamaphupha, uphawu lwephupha "isiseko sombane" luphawu lwesimo sokulala ngokubhekisele kwisini sakhe. Ukwenza isixhobo sesandi kufuna ubuntununtunu obuninzi, kodwa kunye nothando. Ke ngoko, amava ephupha angalunga.
Ke ngoko, uhlobo lomculo lubaluleke kakhulu ekutolikweni kwamaphupha. Izandi ezihambelanayo zibonisa umnqweno wobudlelwane boluntu. I-dissonance ephupheni inokutsala umdla ngqu zulwano ngaphakathi nangaphandle. Ngee-bass, i-subconscious ibangela utshintsho kwimeko yokuqonda kwaye ijongane nomphuphi noloyiko olucinezelweyo.
Ngokwengcaciso yohlalutyo lwengqondo lokulala, umfanekiso wephupha ukwamele izakhono zentlalo kunye neemfuno zomntu oleleyo. Ukuba yena ngokwakhe udlala ibhasi yombane kwiqela, iphupha livakalisa ukuxabisa koluntu. Umphuphi uzabalazela ukuba kunye naye kunye nabanye. Ungekatshati kubomi bokwenyani kwaye ulangazelele iqabane.
Ukuba iphupha lidlala yedwa kwisiseko sombane, kubonisa ukuba uyazithemba kubuchule bakho. Akufane uthembe abanye kwaye uthembele kwiqela elincinci labantu. Ngokwenkcazo yephupha, uphawu lwephupha lubonisa ubuntu obuzithemba bodwa okanye obunengxaki yokungazi bodwa.
Uphawu lwephupha «Phantsi» - ukutolika kokomoya
Ngokwengcaciso yokuchazwa kwamaphupha okomoya, uphawu lwephupha "isiseko sombane" simele a unxibelelwano kubuthixo kwaye ivumela umphuphi ukuba abonakalise imeko yakhe yokomoya.
Ukuba wenza umculo kunye nabanye ephupheni, umfanekiso wephupha ubonakalisa ulungelelwaniso lwangaphakathi kunye nokuvisisana nabanye.